Start Online Learning Today | LCCI
📔 Starting Date ကိုမိမိကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လိုက်ပါ
HSH ONLINE LEARNING Website တွင် LCCI Level2Bookkeeping & Accounting အတွက် Online Learning Syllabus Lecture များကို အပြည့်အစုံလွှင့်တင်ပြီးဖြစ်ပါပြီ။ Level3Accounting လည်း 75% လွှင့်တင်ပြီးဖြစ်သလို Level3Cost & Management Accounting ကိုလည်း လေ့လာသင်ယူနေကြပါတယ်။ Starting Date ဟာနက်ဖြန်လည်းဖြစ်နိုင်သလို ဒီနေ့စလုပ်ရင်ဒီနေ့ပါပဲ။ မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လို Guideline လုပ်မလဲပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်။
🚅 Leading Accountancy Online Learning Myanmar
1. ယခုမှစပြီး Accounting ကိုအခြေခံခိုင်မာအောင်သင်ယူမည့်သူတွေ
2. LCCI Exam ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့်သူတွေ
4. စာနဲ့အဆက်ပြတ်တာနှစ်ကာလကြာသွားလို့ အလုပ်ထဲရောက်နေကာမှပြန်လည်လေ့လာလိုသူတွေ
🏁 ၂၄နာရီ အားလျှင်အားသလိုအချိန်မရွေးလေ့လာသင်ယူလို့ရနေသောကြောင့်အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။
*** ချတွက်လေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ***
🗓️ Set Your Starting Date
HSH Online Learning သည် 24 Hours Online Learning Website ဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ကစသင်သင်ရပါတယ်။
Starting Date ကိုသင်ယူမည့်သူကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ မနက်ဖြန်ဟာ Starting Date ဖြစ်နိုင်သလို ဒီနေ့စလုပ်ရင်ဒီနေ့က Starting Date ပါ။ တကယ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုသူများအချိန်မဆွဲပဲစလုပ်လိုက်ပါ။
☝️ Starting Date ကိုတစ်ခါပဲသတ်မှတ်ပါ
တစ်ခါသတ်မှတ်ပြီးရင် နောက်နေ့တွေဟာ Starting Date မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့။ သင်ခန်းစာတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို နေ့တွေနဲ့အတူရွေ့လျားနေပါစေ။ ၆လအတွင်းပြီးအောင်လုပ်ရပါမယ်။
Exam Date ကတော့ သင်ယူတဲ့ကာလကစပြီး ၅လ ၆လ အကြာလောက်မှာဖြေဆိုလိုက်ပါ။ ၆လခွင့်ပြုထားပေးပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လိုအပ်ခဲ့ရင် ကာလတိုးမြှင့်ပေးပါမယ်။ အချိန်တော့မဆွဲသင့်ပါဘူး။ Level2နဲ့ Level3Accounting အတွက် ၃လအတွင်းသင်ရိုးကိုလေ့ကျင့်သင်ယူပြီး ၂လလောက်မေးခွန်းဟောင်းတွေကို ဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါ။ သင်ရိုးအပြင်မေးခွန်းဟောင်းလေ့ကျင့်ဖို့ကိုပါပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ မေးခွန်းဟောင်းလေ့ကျင့်ဖို့ကိုစာအုပ်ပို့ပေးပါမယ်။
အမှန်တကယ်တတ်မြောက်နားလည်အောင်သင်ယူပါ။ LCCI ( UK ) Exam ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါ။
LCCI သင်ရိုးသည် ACCA နှင့် Higher Level များကိုဆက်လက်သင်ယူသည့်အခါခိုင်မာသောအထောက်အကူဖြစ်သည်ကို သင်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့ဖူးသူတိုင်းသိကြပါတယ်။
🗣️ Discuss ( or ) Ask
စာမေးဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ စာမေးချင်တာရှိရင်သင်တန်းသို့အချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။ Phone, Chat Box or Email သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
✍️ Taking Your Tests
Test များလည်းပုံမှန်ဖြေဆိုပြီး Online မှ ပြန်လည်ပို့ပေးပါ။ စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည်များကိုပြုပြင်ပေးပါမည်။
🏁 Set Your Starting Date ” Today ” !
💻 Sign Up Here